Fampiharana Visa Indiana an-tserasera, eVisa India - India Visa Online
Ireo fomba fiasa Indiana Visa
Ny governemantan'i India dia nanao ny fangatahana Visa Indiana an-tserasera na ny fizotran'ny fangatahana e-Visa Indiana tsotra, mora, an-tserasera, hahazo e-Visa India amin'ny alàlan'ny mailaka ianao. Ity dia fandrakofana manam-pahefana amin'ny antsipiriany rehetra tokony ho fantatrao momba an'ity dingana fampiharana Visa Indiana an-tserasera ity.
Ny Visa Indiana dia tsy misy intsony amin'ny endrika taratasy nentim-paharazana fangatahana izay manahirana be toy ny zavatra hafa tsy maintsy mitsidika ny masoivoho Indiana eo an-toerana mba hahazoana ny Visa Indiana. Ankehitriny, ny governemantan'i India dia nanao mora kokoa noho ny hatramin'izay, ary misy ihany koa ny elektronika na e-Visa ho an'i India (e-Visa India Online) misy izay azo ampiharina amin'ny Internet mora foana. Nahatonga ny fitsidihan'i India tena mety ho an'ireo mpandeha iraisampirenena izay tsy maintsy nandalo tsotra be Fampiharana Indiana Visa Fomba hanomezana ny e-Visa Indiana. Na ho an'ny fizahantany izany, hizaha, ary fialam-boly, na ho an'ny orinasa, na ho an'ny fitsaboana, ny taratasy fangatahana Visa India ho an'ireo karazana e-Visa rehetra ireo (e-Visa India Online) dia mora fenoina. Araho ity torolàlana ity amin'ny fizotran'ny fangatahana Visa India azonao atao mangataka amin'ny Internet e-Visa Indiana eto indrindra.
Amin'ny ankapobeny ny sokajy e-Visa karana dia Ilay mpizahatany Indiana e-Visa, Business e-Visa Indiana, E-Visa Indiana ary Mpitsabo ara-pitsaboana Indiana e-Visa.
Alohan'ny hamenoana ny taratasy fangatahana Visa an-tserasera India:
Alohan'ny hamenoanao ny endrika fangatahana Visa any India dia tokony ho fantatrao ny fepetra takiana amin'ny e-Visa (e-Visa India Online). Ny fangatahana ny e-Visa Indiana ihany no azonao ampiharina raha toa ka mahafeno ireo fepetra takiana amin'ny fahazoana alalana ireo ianao.
Mila olom-pirenena ianao ny iray amin'ireo firenena 180+ izay olom-pireneny dia afaka mahazo ny Visa any India.
The tanjon'ny fitsidihanao tsy maintsy fizahan-tany, raharaham-barotra, na ara-pitsaboana.
Amin'ny alàlan'ny fahazoana antoka fotsiny no hidiranao ny firenena Lahatsoratra nahazo alalana momba ny fifindra-monina izay misy seranam-piaramanidina 28 sy seranan-tsambo 5.
Fahazoana ny fepetra takiana amin'ny fahazoana alalana manokana amin'ny karazana e-Visa tadiavinao izay miankina amin'ny tanjon'ny fitsidihanao an'i India.
Ho fanampin'izay, tokony ho azonao antoka koa fa manana ianao vonona ny antontan-taratasy rehetra ary fampahalalana izay takiana aminao omena rehefa mangataka ny e-Visa Indiana. Vakio eto momba ny Fepetra takiana amin'ny sary e-Visa Indiana (e-Visa India Online)
Antontan-taratasy tsy maintsy omenao eo am-panaovana fangatahana ho an'ny e-Visa karana:
Na inona na inona karazana e-Visa tadiavinao dia mila manome kopia malefaka amin'ireto antontan-taratasy manaraka ireto ianao:
Kopian'ny mpitsidika vao tsy ela akory izay sary miloko amin'ny pasipaoro (ny tarehy ihany, ary azo alaina amin'ny telefaona iray), adiresy mailaka miasa, ary carte debit na carte de crédit ho an'ny fandoavana ny sarany fangatahana.
Fepetra takiana manokana amin'ny karazana e-Visa ampianarinao:
Karatra fandraharahana ho an'ny e-Visa karana ho an'ny orinasa
Ny fizotran'ny fangatahana Visa any India amin'ny antsipiriany:
Raha vantany vao azonao ny zava-drehetra takiana aminao dia afaka mangataka amin'ny e-Visa Indiana ianao. Tokony hangataka amin'ny 4-7 andro farafahakeliny alohan'ny sidinao na fidirana ao amin'ny firenena satria maharitra 3-4 andro vao azo ekena ny fangatahana Visa. Ny dingana iray manontolo dia amin'ny Internet ary mety izany tsy mila mandeha any amin'ny Masoivohon'i India any amin'ny firenenao na inona na inona antony. Azonao atao dieny izao ny mandeha any amin'ny terminal Airport na Cruise rehefa avy nahazo e-Visa Indiana (e-Visa India Online) amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny adiresy misy anao.
Ity misy ny dingana rehetra momba ny Visa any India:
Mila mameno ny Fangatahana fangatahana Indiana Visa ary apetraho amin'ny Internet.
Mila manome ianao antsipiriany manokana, antsipirian'ny pasipaoro, ny antsipirian'ny toetrany ary ny heloka bevava taloha. Hamarino tsara fa ny pitsopitsony avy amin'ny pasipaoronao izay ampidirinao amin'ny tanana amin'ny endrika fangatahana dia mifanaraka amin'ny antsipiriany aseho amin'ny pasipaoronao.
Tsy maintsy mampakatra ihany koa ianao sarina endrika pasipaoro amin'ny tavanao, izay tokony mifanaraka amin'ny masontsivana napetraky ny Governemanta India. Ireo famaritana ireo dia azo vakianaEto.
Aorian'izany dia azonao atao ny mandoa ny fandoavam-bola amin'ny vola an'ny iray amin'ireo firenena 135 navela ny vola. Azonao atao ny mampiasa carte de crédit, debit card, na Paypal raha te hanao izany.
Aorian'ny fandoavana amin'ny ankamaroan'ny tranga antsipiriany momba ny fianakavianao, ny ray aman-dreninao ary ny vadinao hanontaniana. Hangatahana ihany koa ianao hanome vaovao fanampiny mifototra amin'ny tanjon'ny fitsidihanao sy ny karazana Visa tadiavinao.
Ho an'ny e-Visa mpizahatany dia mety angatahina aminao porofon'ny fanananao vola ampy hamatsy vola ny dianao ary mijanona any India.
Ho an'ny e-Visa momba ny asa, tsy maintsy omenao ny karatry ny orinasanao na ny sonia mailakao, ary ny adiresy tranokala, ny antsipirihany momba ny fikambanana indianina hotsidihinao, ary taratasy fanasana avy amin'ilay orinasa voalaza.
Ho an'ny e-Visa ara-pitsaboana, tsy maintsy manome taratasy avy amin'ny hopitaly indianina ianao hahazo fitsaboana ianao ary hamaly ny fanontaniana momba izany.
Ho an'ny mpitsabo mpitsabo e-Visa, tsy maintsy manome ny antsipirian'ny Visa an'ny marary ianao fa hiaraka ianao.
Tsy maintsy manome izany rehetra izany ianao amin'ny alàlan'ny rohy azo antoka alefa amin'ny mailakao.
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny fanapahan-kevitra ho an'ny Visa dia horaisina ao anatin'ny 3-4 andro ary raha ekena ianao dia hahazo ny visa elektronika an-tserasera. Tsy maintsy mitondra kopia malefaka misy pirintan'ity e-Visa ity hiaraka aminao mankany amin'ny seranam-piaramanidina ianao.
Araka ny hitanao, ny taratasy fangatahana Visa Indiana sy ny fizotran'ny fangatahana Visa Indiana an-tserasera dia tsotra sy mahitsy ary tsy tokony ho sahirana ianao amin'izany. Na izany aza, raha mila fanazavana tokony hifandraisanao ianao Birao fanampiana fanampiana e-visa karana ho fanampiana sy fitarihana. Ny governemanta India dia nanamora ny fizotrany. Citizens of United States, United Kingdom, Italia, France, Alemana ankoatry ny firenena 180+ hafa dia azo ekena.